बाँयातर्फ फर्केर सुत्नुका यी फाईदा - ज्ञानविज्ञान
बाँयातर्फ फर्केर सुत्नुका यी फाईदा
एउटा भनाई छ ‘राती चाडै सुत्नुहाेस् बिहान चाडै उठ्नुहाेस्’ तर आजभाेलीकाे व्यस्त जीवनशैलीले गर्दा हाम्राे सुत्ने र उठ्ने समय फरक छ । बिहान छिटाे उठेपनि राती अबेरसम्म बस्ने गर्छाै जसका कारण डिप्रेसन,उच्च रक्तचाप, ताैल बढ्नेजस्ता थुप्रै समस्या देखिन्छन् ।
समयमा नै सुत्ने उठ्ने मान्छेका लागि पनि सुताई नमिल्दा स्वास्थ्यमा विभिन्न असरहरू देखा पर्न सक्छन ।
गर्भअवस्थामा अधिकांश महिलाहरूलाई ढाडकाे समस्या हुने गर्छ । यस्ताे समस्याबाट पिडपत महिलाहरूलाइ चिकित्सकहरू बाँया तर्फ फर्केर सुत्ने सल्लाह दिन्छन् ।
राती सुत्नुअघि खाना नहुने कुराहरु यसप्रकार छन्
चकलेटमा क्याफिन हुन्छ । कालो खालको चकलेटमा क्याफिनको मात्रा अझ बढी हुन्छ । क्याफिनजन्य चिज खानाले मानिस थकानरहित हुन्छ र शरीरमा पाचनसम्बन्धी रासायनक्रिया तीव्र बन्छ । साथै, यसले शरीरलाई डिहाइड्रेट गराउँछ । सुत्नुअघि मानिसको शरीरमा यस्ता परिवर्तन आउनु ठीक मानिँदैन ।
२. मसलायुक्त खाना
बदाम, दूध, चिज आदिमा प्रोटिनको मात्रा सन्तुलित मात्रामा पाइन्छ, जसले मिठो निद्रा लगाउँछ । रातो मासुमा प्रोटिन उच्च मात्रामा पाइन्छ । यसले अनिद्राको समस्या उत्पन्न गराउँछ । किनभने, प्रोटिन पचाउन शरीरलाई अप्ठेरो हुन्छ । साथै, प्रोटिनमा पाइने एमिनो एसिडले दिमागलाई चनाखो राख्छ र निद्रा पर्न दिँदैन ।
६. केही तरकारी
फलफूल र तरकारी स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो । यसले शरीरमा रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने गर्छ । तर, कुनै–कुनै फलफूल र तरकारी यस्ता हुन्छन्, जसलाई सुत्नुअघि खायो भने निद्रा पर्दैन । काउली, ब्रोकाउलीलगायत तरकारीमा पाइने तत्वले दिमागमा उत्पन्न हुने ट्राइप्टोपान नामक एमिनो एसिडको प्रभावलाई कमजोर बनाइदिन्छ ।
ट्राइप्टोपान मिठो निद्रा लगाउन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, बन्दाकोबी, कोसे तरकारी, सेतो च्याउ, गोलभेँडालगायत तरकारी पनि सुत्नुअघि भरिसक्के खानु हुँदैन ।
सुत्नुअघि मिठाई, केक, चकलेट, कुकिज अथवा आइसक्रिम खाने बानी कसैकसैमा हुन्छ । यसले मनलाई आनन्द त देला, तर मिठो निद्रा दिँदैन । यस्ता खाद्य पदार्थमा चिनीको मात्रा उच्च हुन्छ, जसलाई राती सुत्ने बेला नियमित खानाले निद्रा पर्दैन ।
८. जंक फुड
खाना बनाउन अल्छी मानेर राती जंक फुड खाएर सुत्नेको संख्या बढिरहेको छ । क्यान्डी बार, पोट्याटो चिप्स, चाउचाउलगायत फास्ट फुडलाई डिनरका रूपमा खानेको संख्या बढिरहेको छ । तर, यस्ता खानामा फ्याट र सुगरको मात्रा बढी हुन्छ, जसले निद्रा उत्पन्न गराउने हार्मोन काट्ने काम गर्छ ।
तपाईंले बटर मिल्क घरमा लिएर राख्दा उपयुक्त हुन्छ । खानसँगै यसको प्रयोगले तपाईंको जीवनलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ ।
खानासँग रायोको साग खाँदा पनि रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ । बटर मिल्क र रायोको सागले पाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र चुस्त राख्ने काम गर्दछ । तर, बेलुकीको खानासँग भुलेर पनि दहीको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
नुहाउनु भन्दा पनि जरुरी त सुत्नुअघि अनुहार धुनु हुन्छ । किनभने यस्तो गर्ने गरिएन भने दिनभरिको फोहरका कारण अनुहारमा खटिरा आउन सक्छन् ।
Don't Miss it किन झमझमाउँछ हातखुट्टा ? यस्तो भए के गर्ने ?